सिंगापुर देखि मौरिरस सम्म नेपालीको अबैध धन ! कहाँ कति लगानी ? « Pokhara Pati
सिंगापुर देखि मौरिरस सम्म नेपालीको अबैध धन ! कहाँ कति लगानी ?
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले गरेको अध्ययनले नेपालबाट ठूलो मात्रामा अवैध धनको ओसारपसार भइरहेकोे देखाएको छ ।
नेपालीले कानून विपरीत सिंगापुरदेखि मौरिसससम्म अवैध धनको कारोबार गरिरहेको खुलेको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अवैध धनको प्रवाहका विषयमा गरेको ताजा अनुसन्धानले अवैध आर्जन लुकाउन अनुकूल मानिने देशहरुमा नेपालीको ठूलो लगानी रहेको भेटिएको हो।
द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले अवैध धनको प्रवाहबारे गरेको अनुसन्धानले सन् २०१८ मा सिंगापुरमा नेपालीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५५ मिलियन डलर (अहिलेको मूल्यमा रु. ६ अर्ब ६० करोड) छ । अनुसन्धानको सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार, कोरियामा सन् २०१८ मा नेपालीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगानी १० मिलियन डलर (करीब रु. १ अर्ब २० करोड), थाइल्याण्ड, रसिया, चीनमा सात–सात मिलियन डलर (प्रत्येकमा करीब रु. ८४ करोड) छ । इटाली, भारत, भुटान, साइप्रस र नाइजेरियामा पनि नेपालीको लगानी देखिएको छ।
द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले नेपालीको लगानी रहेका अधिकांश देशलाई वित्तीय पारदर्शिता र कर प्रणालीका हिसाबले जोखिमयुक्त देशका रुपमा राखेको छ ।
स्राेत: द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्क
त्यस्तै, ‘ट्याक्स हेवन’ अर्थात् सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्न सुरक्षित मानिने मुलुक मानिएको मौरिससमा नेपालीले १० लाख डलर लगानी गरेको देखिएको छ । यो सबै गैरकानूनी रूपमा गरिएको लगानी हो । किनकि, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालीलाई सरकारको अनुमति नलिई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ।
द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले नेपालीको लगानी रहेका अधिकांश देशलाई वित्तीय पारदर्शिता र कर प्रणालीका हिसाबले जोखिमयुक्त देशका रुपमा राखेको छ । सिंगापुरको फाइनान्सियल सेक्रेसी स्कोर (वित्तीय गोपनीयता सूचक) ६५ छ। जुन वित्तीय पारदर्शिताको दृष्टिले जोखिमयुक्त हो।
नेपालको वित्तीय गोपनीयता सूचक ६३ छ, जुन दक्षिण एशियामै उच्च हो । यसको अर्थ, नेपालमा शंकास्पद धन लुकाउन वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न दक्षिण एशियाका देशहरुको तुलनामा सहजता छ भन्ने हो ।
नेटवर्कले धन लुकाउन वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न कति सहजता छ भन्ने आधारमा वरियता तोक्छ । गोपनीयताको आधारमा ० देखि १०० अंक तोकिन्छ, जसमा ० पूर्ण रूपमा पारदर्शी र कर प्रणालीका हिसाबले उत्तम मानिन्छ भने १०० हुने देश अपारदर्शी र वित्तीय गोपनीयताको हिसाबले बढी भएको मुलुक मानिन्छ।
नेपालको वित्तीय गोपनीयता सूचक ६३ छ, जुन दक्षिण एशियामै उच्च हो । यसको अर्थ, नेपालमा शंकास्पद धन लुकाउन वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न दक्षिण एशियाका देशहरुको तुलनामा सहजता छ भन्ने हो।
नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आधारमा पनि अवैध धनको ओसारपसार भइरहेको हुनसक्ने अध्ययनले संकेत गरेको छ । अध्ययनका अनुसार, सन् २०१८ मा भारतबाट २८ करोड ६० लाख डलर भित्रिएको थियो । दोस्रोमा चीनबाट २४ करोड ८० लाख डलर प्र्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै, कालोधनको कारोबारका लागि शंकास्पद मानिने मौरिससबाट ११ करोड ५० लाख डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको अध्ययनले देखाएको छ। मौरिससको वित्तीय गोपनीयता सूचक ७२ छ, जुन उच्चमध्ये एक हो।
नेपालमा साइमन आइल्याण्ड, मौरिसस जस्ता ट्याक्स हेवन देशबाट पोर्टफोलियो इन्भेष्टमेन्टका रुपमा पनि शंकास्पद धन आइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यी दुबै देशबाट सन् २०१८ मा १०/१० लाख डलर भित्रिएको थियो ।
त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट ३४ मिलियन डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यूएईको वित्तीय गोपनीयता सूचक ७८ छ, जुन उच्च हो ।
नेपालमा साइमन आइल्याण्ड, मौरिसस जस्ता ट्याक्स हेवन देशबाट पोर्टफोलियो इन्भेष्टमेन्टका रुपमा पनि शंकास्पद धन आइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यी दुबै देशबाट सन् २०१८ मा १०/१० लाख डलर भित्रिएको थियो।
अध्ययनले नेपालका ब्याङ्कबाट विदेशका ब्याङ्कमा हुने कारोबार पनि जोखिमयुक्त सूचीमा राखेका देशमा बढी भएको देखाएको छ । सन् २०१८ सम्ममा हङकङका ब्याङ्कमा नेपाली ब्याङ्कले १ अर्ब २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु. १ खर्ब २२ अर्ब ) लगानी गरेका छन् । हङकङको वित्तीय गोपनीयता सूचक ६६ छ । कालोधन थुपार्न अनुकूल मानिने ट्याक्स हेवन देश स्वीट्रल्याण्डका ब्याङ्कमा नेपाली ब्याङ्कको २५ करोड २० लाख डलर (करीब रु. ३० अर्ब) जम्मा गरेर कारोबार गरिएको छ।
द ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ब्याङ्क फर इन्टरन्याशनल सेटलमेन्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिको तथ्यांकमा आधारित भएर अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको छ। यो खबर हिमाल खबरमा रमेश कुमारले लेखेका छन्